Astaan | Simrani
Macluumaadka sida ku xusan § 5 TMG
Cawil mustafa Ibraahim
Charlottenburger Strasse 81
Xalinta khilaafka EU
Komishanka Yurub wuxuu bixiyaa qalab loogu talo galay xalinta khilaafaadka khadka tooska ah (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Waxaad ka heli kartaa cinwaanka e-maylkeena astaanta kor ku xusan.
Xalinta khilaafaadka macaamiisha / guddiga dhexdhexaadinta guud
Diyaar uma nihin ama naguma qasbana inaan kaqeyb qaadano dacwada xalinta khilaafaadka hortiin guddiga dhexdhexaadinta.
Adeeg bixiye ahaan, annaga ayaa mas’uul ka ah waxayaabaheena gaarka ah bogaggaan si waafaqsan shuruucda guud iyadoo la raacayo Qeybta 7 (1) TMG. Sida ku xusan §§ 8 ilaa 10 TMG, annaga oo ah bixiye adeeg ayaa naguma khasbana in aan la soconno macluumaadka cid saddexaad la gudbiyey ama lagu keydiyey ama aan baarnay duruufaha muujinaya wax-qabad sharci-darro ah.
Waajibaadka saaran in meesha laga saaro ama lagu xannibo adeegsiga macluumaadka sida ku xusan shuruucda guud wali wax saamayn ah kuma yeelan. Si kastaba ha noqotee, mas’uuliyadda arrintan la xiriira waxay suurtogal noqon kartaa oo keliya marka aan ka warqabo ku xad gudub sharciyeed oo gaar ah. Isla markii aan ogaano xadgudubyada noocaas ah, si dhakhso leh ayaan uga saari doonnaa qoraalkan.
Waajibaadka isku xidhka
Ujeedadayadu waxay ka kooban tahay xiriiriyeyaal websaydhada dibadeed ee dhinacyada saddexaad, waxyaabaha aynaan saameyn ku lahayn. Sababtaas awgeed, ma aqbali karno wax mas’uuliyad ah oo ka kooban waxyaabaha dibadda ah. Bixiyaha ama hawl wadeenada bogagga ayaa had iyo jeer mas’uul ka ah waxyaabaha ka kooban bogagga lala xiriiriyo. Bogagga iskuxiran waxaa laga hubiyay inay suurta gal tahay xad gudub sharciyeed waqtiga xiriirku abuuray. Ma jiro wax sharci darro ah oo la ogaan kari waayey markii xiriirka la abuuray.
Koontaroolka joogtada ah ee waxa ku jira bogagga lala xiriiriyo macquul ma aha iyada oo aan la hayn caddayn la taaban karo oo xadgudub ah. Sida ugu dhaqsaha badan markaan ogaano xadgudubyada sharciyeed, waxaan isla markiiba ka saari doonnaa xiriirradaas.
Nuxurka iyo shaqooyinka bogaggan ay abuurtay hawl wadeenka goobta ayaa hoos imanaya sharciga daabacadda ee Jarmalka. Nuqulo, tifatirid, qaybinta iyo nooc kasta oo adeegsi ah oo ka baxsan xadadka sharciga xuquuqul insaanka ayaa u baahan oggolaanshaha qoraalka ah qoraaga iyo hal abuuraha. Soo dejisashada iyo nuqulada boggan waxaa loo oggol yahay oo keliya adeegsiga gaarka ah, iyo kan aan ganacsiga ahayn.
Ilaa iyo inta nuxurka kujira boggan uusan abuurin howlwadeenka, xuquuqda daabacaadda qeybaha seddexaad waa la ixtiraamaa. Gaar ahaan, waxyaabaha xisbiga saddexaad ka kooban waxaa loo calaamadeeyay sidan oo kale. Si kastaba ha noqotee haddii aad ka warhayso ku xad gudubka xuquuqda daabacaadda, fadlan na soo ogeysii. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan ogaano xadgudubyada sharciga ah, isla markiiba ayaan ka saari doonnaa waxyaabahaas oo kale.